Oosomashishini beNtethe yaseUganda ngoku abafane kwenzeke ukuba bangabikho kumatshantliziyo eCOP26
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseUganda » Oosomashishini beNtethe yaseUganda ngoku abafane kwenzeke ukuba bangabikho kumatshantliziyo eCOP26
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Xanduva • News Sustainability • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseUganda
NjengeNkomfa yoTshintsho lweMozulu ye-UN malunga nokunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni ukuya kwi-1.5 degrees, eyaziwa ngokuba yi-COP26, yenzeka eGlasgow ukusuka nge-1-12 kaNovemba, ngo-2021, bengazi iinkokeli zehlabathi ezikhoyo, ilokishi encinci eyaziwayo ngaphandle kweGreater Masaka City, ekwiikhilomitha ezili-130 kumzantsi-ntshona. Ikomkhulu lase-Uganda, iKampala, uluntu lwaseUganda beziphila ngokuvuna iintethe logama ubukumkani baseBuganda bukhona ukusukela ngenkulungwane ye-13, kubandakanya nalapho intathovini eyaziwa ngokuba yi "nsenene" yenye yezizwe ezingama-52 eBuganda. .
EBukakata emi ngaphandle kweMasaka enkulu kunxweme lweLake Victoria, uluntu luyabulala ngenxa yokuvuna obu bumnandi buthandwayo phakathi kweenyanga zemvula zikaMeyi noNovemba.
Kulapho iintethe zinyanzelwa ukuba ziphume kwimigqomo yazo ziimvula.
Yahluke kakhulu “kwiKrisimesi emhlophe” eNtshona, ebonakala ngokuwa kwekhephu ukuvakalisa ixesha lonyaka.
EUganda ziintethe ezithi ngokoqobo “zikhephu” esibhakabhakeni, zitsalela abantu abaninzi ukusuka kubantu abadala ukuya kubantwana abaphilayo bedlala bevuna aba bahlalutyi. Ukuba uSanta Claus (uSt. Nicholas) wayengummi waseUganda, mhlawumbi elo xesha laliza kubizwa ngokuba “yiKrismesi eluhlaza.”
Ngokukhulayo, olu rhwebo luye lwaba lishishini elikhulu elinoosomashishini abaliqela baseUganda abasebenzisa izibane eziqaqambileyo kunye nomsi ophuma kwingca evuthayo ukuze boyike ezi zilwanyana zasebusuku zityumza intsimbi zize zityibilike kwimiphanda ukuze zibanjiswe zize zivunwe ziyimininzi. Ezi dolophana zikhanyiswe kakuhle kangangokuba ngesinye isihlandlo xa wayehamba ngobusuku esuka eKigali esiya eKampala, lo mbhali ngempazamo walatha izibane njengesixeko saseMasaka, waqonda ukuba yayilibubu leentethe ezitsaleleke ekukhanyeni, nto leyo eyabadanisa kakhulu. abanye abahlali.
Ingxowa yezi ntethe inokuthenga ukuya kuthi ga kwi-UGX 280000 (US$80) ngexabiso elikhulu eKampala apho ifunwa kakhulu kubathengisi basesitalatweni abayithengisela abakhweli kwitrafikhi ukuya kwiimarike ezinkulu zedolophu. Uninzi lwabahlali baseMasaka baye bakwazi ukuziphilisa, bakha izindlu, bade bafundise nabantwana balo ngomsebenzi wobugcisa.
Ngaphezu koko, ngokophando olwenziwa yiFood and Agricultural Organisation (FAO), izinambuzane ezityiwayo ziphucula indlela yokuphila, zinegalelo kukhuseleko lokutya nesondlo, kwaye zinendawo ephantsi yendalo xa kuthelekiswa neminye imithombo yeprotheyini evela kwinyama yenkomo, yehagu, yenkukhu, kunye neyokutya. iigusha.
Ngaphandle kobungqina bexabiso labo lezondlo njengezinye iindlela zokutya ezinesondlo kunye nokugcinwa kokusingqongileyo, amazwe afana eusa, amazwe e-EU, kunye ne-UK azizange zihlengahlengise izithintelo ukuze zivumele ukungeniswa kwezinambuzane naxa zipakishwe ukuba zithunyelwe ngaphandle. Abakhenkethi abaliqela base-Afrika baye badibana nolawulo oluluqilima lwemida olutshabalalisa obu bumnandi buxabisekileyo xa befika kwiindawo zabo bephoxekile. Ngesinye isihlandlo, umkhweli waseUganda (igama ligodliwe) wanyula ukulahla iintethe ezixabisekileyo ngomlomo kunokuba azinikele kubasebenzi bomthuko base-US, kungekhona emva kokuhamba isiqingatha sehlabathi.
Kukho nobungqina bokuba izinambuzane zikhupha iigesi zegreenhouse kunye ne-ammonia encinci kunemfuyo yesiqhelo eyenza i-14.5% yokukhutshwa kwegesi yendalo yomhlaba wonke, apho i-methane evela kwimfuyo iyingxaki enkulu ye-16 ekhulwini, ngokutsho kweZizwe eziManyeneyo zoKutya kunye nezoLimo (FAO). ).
Izinambuzane zifuna iqhezu lomhlaba, oomatshini basefama abafana neetrektara, izibulali-zinambuzane okanye iimpompo zokunkcenkceshela, kwaye zikhula ngeentsuku kuneenyanga okanye iminyaka. Basebenzisa amandla amancinci xa kuthelekiswa nezinye iindlela zezolimo eziyeyona nto ibangela ilahleko yendalo ephilayo kwihlabathi jikelele kwaye inegalelo elikhulu ekukhutshweni kwegesi yegreenhouse. Ngomlinganiselo womntu omnye ukuya kwi-1 yeebhiliyoni zezinambuzane, oku kukhulu kwaye kunokuba sisiqabu kwisondlo sehlabathi nokuba sinikwe umgubo okanye iifom ezinencasa ngakumbi ukusindisa ubomi.
E COP26 apho uGreta Thunberg athathe inxaxheba ekunye namatsha ntliziyo aselula emozulu, uVanessa Nakate waseUganda wayibiza le ngqungquthela njengokusilela esithi “ngumnyhadala wehlabathi jikelele we-greenwash.
Akakude nenyaniso apho i-G20 ingahambi intetho nangona igalelo le-80% ye-CO2 emissions. Logama nje izinambuzane zingekho kwimenyu yesidlo sengqungquthela elandelayo (njengoko bekulindeleke ukuba kube njalo kodwa kwezinye iibhotile ezinqandekileyo) ukongeza kwi-escargot, i-sushi, kunye ne-caviar-iqhele ngakumbi kwi-palette yasentshona, ihlala iyintsilelo. UNakate wongeze wathi, “Ngokwembali, iAfrika inoxanduva lwe-3% kuphela yezinto ezikhutshwayo kwihlabathi kwaye nangona kunjalo ama-Afrika athwaxwa zezona mpembelelo zikhohlakeleyo ziphenjelelwa yimeko yemozulu. Nangona kunjalo, unike amazwi ethemba, ecebisa ukuba utshintsho lunokwenzeka ukuba abaphembeleli bayaqhubeka nokubamba iinkokheli ziphendule ngokonakalisa imozulu.
Okulusizi kukuba, emva ekhaya eNakate’s Uganda, kuye kwakho ukwehla kwezivuno zokuvuna iintethe ukuze zihambelane nemiphumo emibi yokutshintsha kwemozulu ngenxa yokutshatyalaliswa kwamahlathi. EBukatata, imimandla emikhulu efikelela kwi-9,000 yeehektare zendawo yokuhlala yasendle eyayifudula ingamahlathi nengca ngoku ingamasimi eepayina.
EKampala apho iintethe zazidla ngokuwa kude kube yi-90s, iindawo eziluhlaza kunye nehlathi elixubileyo linike indlela yokwakhiwa kweendawo ezinkulu, izakhiwo eziphakamileyo, iindawo zokuhlala kunye neendlela.
Mhlawumbi xa sijonga umva, unozakuzaku ongaqapheliyo kwiintethe kunye nabaphembeleli bokutshintsha kwemozulu ngalo mbandela, yayinguLupita Nyong'o, owaphumelela kwiziko lomdlalo weqonga ogqwesileyo ngo-2014, xa wayethetha ngesinxibo sakhe ekuvulweni komnyhadala wefilimu wase-Cannes kwi-"nsenene" yase-Uganda. ,” ngombala wayo kunye noyilo olufana namaphiko kunye nokunika imbeko kubafazi baseUganda ngokuphefumlelwa kweenwele.
Kude kube lelo xesha, oosomashishini bentethe baseUganda baya kuhlala bengacacanga njengee-nook zabo eMasaka de umntu osuka kwi-G20 afumane imemo.